Ozi bara uru ileta South Korea | Akụkọ Njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, South Korea
¿Gaa na South Korea? Ọ bụ ezigbo echiche ịtụle etu ihe dị na ọkara nke ọzọ nke peninshula? Nna m siri mba mana m siri ọnwụ ee, enwekwara m ndi enyi ugbo elu no na aka!
Ọ bụrụ na North Korea anaghị atụ gị ụjọ ma ọ bụ okwu nzuzu dị egwu nke Trump na-ekwu, tinye South Korea na ụzọ gị. Ọ bụ otu n'ime mba ndị mepere emepe na mpaghara Eshia Pacific ma ruo oge ụfọdụ na-asọmpi na ọbụna nweta ọkwá n'ihe banyere Japan. Ma ka anyị lee ihe anyị kwesịrị ịma tupu ịga South Korea.
1 South Korea, mba ebube
2 South Korea, lee anyị na-aga
South Korea mba ọrụ ebube
Nke bụ eziokwu bụ na n'azụ a "Ọrụ ebube akụ na ụba" dika nke obodo a na ndi ozo huworo, Japan, di n’aka na United States. N'oge dị anya, mgbe ihe egwu sitere na Soviet Union ga-ahụ nke ukwuu ma ụwa nwere ike gbanwee kọmunist ma ọ bụrụ na elegharaghị ndị eze ugwu anya, a na-etinye mba ndị dị ka South Korea na Japan nnukwu ego.
N'ezie, nkà Korea mere nke ọzọ. Ọ bụ ezie na e nwere mba ndị dabara na ịda ogbenye na enweghị mmepe, e nwere ndị ọzọ na-eji ọganihu mba ahụ akpọrọ ihe. Ndị ọchụnta ego mba hụrụ n'anya na-arụ ọrụ iji mee ka obodo ha nwee nnukwu ihe. Ya mere, anyị bịara taa: South Korea nwere ihe 52 nde bi na ya na ụfọdụ ụdị teknụzụ ya dị na mba ụwa.
N'ebe a ị na-arụ ọrụ ogologo oge, ogologo oge (ọ bụ nkezi nke 13 awa kwa ụbọchị ma a na-ekwu maka ịbelata nkezi ahụ n'ihi na ọ na-akpata nsogbu mmekọrịta), yana usoro ezumike nka na ezumike nka ma ọ bụ usoro ahụike dị njọ dị ka nke America. Dịka ị pụrụ ịhụ, e depụtaghachiri ihe ọma kamakwa ndị ọjọọ. N'aka nke ọzọ, ọdịnala ọdịnala na nke kachasị ọhụrụ na ọbụlagodi mgbe Seoul bụ isi obodo na-egbukepụ egbukepụ, ọha mmadụ na-aga n'ihu ịbụ nna ochie na macho na nwanyị nọ na 30s fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nwanyị ga-eji ejiji ndị nsọ.
South Korea, lee anyị na-aga
Peninsula dị n'ebe ugwu nke Asia na ọ dị ihe karịrị otu puku kilomita n’ogologo site na kilomita 175 na nke kacha nso. Na oke ndịda bụ South Korea na akụkụ dị na kọntinent ahụ, North Korea. Obodo ndi isi obodo nwere ihe dika 1000 square kilomita nke elu dika m kwuru na onu ogugu ndi mmadu ruru nde mmadu 52.
South Korea nwere nkwekọrịta visa ịhapụ mba ụfọdụ yabụ ị kwesịrị ịlele ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị dị ka obodo gị. Ọ dabara nke ọma, enwere mba 105 na ndepụta ahụ, Spain sokwa na ha. Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa nke bụ ọnụ ụzọ mba ahụ bụ Incheon International Airport, na gburugburu Seoul, ma ọ bụghị naanị ya mere ọ ga-adabere na ebe ị si.
Ugbu a, ị ga-eruru Incheon? Mgbe ahụ ịbịaru Seoul nso, ịnwere ike iji tagzi, bọs ma ọ bụ tren. Gbọ oloko ahụ dị mma n'ihi na ọ na-egbochi okporo ụzọ mana ụgbọ ala nwekwara ike ịba uru ma ọ bụghị oke ọnụ. Enwere ndị dị adị, adịchaghị mma. N'ụzọ doro anya, tagzi bụ ụzọ kachasị ọnụ dị njem nke atọ.
A na-akpọ ụgbọ oloko AREX, Railgbọ elu ụgbọ okporo ígwè Express, na e nwere ụdị abụọ: iduzi na onye na-eme 12 nkwụsị n'etiti ọdụ ụgbọ elu Incheon na Seoul City. The kpọmkwem ọrụ nwere ọpụpụ ọ bụla 35 nkeji na nkịtị ọrụ ọ bụla 10. Onye mbụ na-efu 14.800 merie (ọ bụ ezie na taa e nwere nkwalite na-enweghị ngafe ụbọchị na-ebelata ya 8000 merie). Servicegachi ọrụ efu 4250 merie.
A ghaghị ịzụta tiketi ụgbọ oloko na atlọ Ọrụ Ndị Ahịa (na okpuru ulo B1), ma ọ bụrụ na ị na-aga njem ụgbọ elu Korea ma ọ bụ China ị nwere ego. Enwere ike ịkwụ ụgwọ site na kaadị kredit ma ọ bụ ego. Maka akụkụ ya, ụgbọ oloko nkịtị na-ere tiketi ya na ọdụ ụgbọ njem ụgbọ elu, na ọdụ ụgbọ elu B1 ma ọ bụ na ụlọ ahịa dị mma ma ọ bụ na ebe ndị njem nleta dị nso ọnụ ụzọ ámá 5 na 10 na ala mbụ. Naanị nabata ego.
Maara Japan? The kpọmkwem otu dị ka Narita Express na ndị nkịtị na otu bụ a ọma ma dị mfe ụgbọ okporo. Ugbu a, ọ bụrụ n ’ịchọrọ bọs, ị kwesịrị ịma nke ọma onye ị ga-aga, dị ka ebe ị na-aga na Seoul. Nwere ike ịjụ n'ọfịs igbe nke ruru gị mma ma ị nwere ike ịhọrọ nke ọkọlọtọ ma ọ bụ ụgbọ ala adịchaghị. Ndị mkpuchi dị n'ọnụ ụzọ 4-9 na ala 1 ma ọ bụ n'ọnụ ụzọ 4-13 n'ọnụ ụzọ mpụga.
Taksi nwere ike iri ihe ruru 3 merie, mana ọ bụrụ na ị bịarute n'abalị tinye 20% maka ọnụego abalị ahụ. Dịka ị pụrụ ịhụ, ego mba bụ nke meriri, ya mere ịzụta ha ị nwere ike iji ọrụ nke ụlọ akụ ma ọ bụ ụlọ mgbanwe. Lọ akụ na-arụ ọrụ n'etiti elekere 9 nke ụtụtụ na elekere anọ nke mgbede. N'otu ọdụ ụgbọ ahụ ị nwere ụfọdụ ụlọ akụ.
Nke kachasị mma, South Korea nwere mmasị na ndị ọbịa ịbịa yabụ ọ nwere njem nleta hotline dị mgbe niile: 1330. Asụsụ ndị dịnụ bụ Bekee, Japanese na Chinese ma ọ na-arụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ bụ n’efu. Ọ dị mma na mmadụ nwere ike iji ya, ọ bụghị ya? E nwekwara a Ndị uwe ojii njem nleta, yi uwe na-acha anụnụ anụnụ, na-abụkarị ebe nlegharị anya kachasị nke mba ahụ. Ọrụ ha bụ ijere anyị ozi, gwa anyị, ma lekọta mmekpa ahụ ọ bụla.
Kedụ ka anyị ga-esi gafere mba a na Seoul ọkachasị? Nke mbu, ekwesiri ikwu na taa ihe kachasi nma nke obodo a bu isi ya na isi ya na odi nfe. Enwere ahịrị metro ise na ụgbọ ala ndị mepere emepe Ha na-aga n'okporo ụzọ nke ha, yabụ ihe niile na-aga. Na bọs na-acha anụnụ anụnụ bụ ndị nwere ụzọ kachasịnụ na acha akwụkwọ ndụNdị na-apụta na k-ejije mgbe mgbe bụ ndị nwere obere ọsọ. E nwekwara uhie uhie, ọkara anya, na edo edo, nke na-agbasa site na ebe kachasị mkpa n'obodo.
Ọ bụrụ n ’ị ga-eji ụgbọ njem ọha mee ihe, ọ ga - adị mma inweta pụrụ iche kaadị n'ihi na e nwere ego na nnyefe na ọ bụ ngwa ngwa. Zụta n'ọdụ ụgbọ oloko ma ọ bụ ụlọ ahịa, obere ahịa, na ego ndị ahụ na-arụ ọrụ mgbe ị na-aga bọs ruo bọs ma ọ bụ metro. Ndị kacha mara amara bụ Cashbee na Tmoney. Wayzọ ụgbọ oloko na-efu 1250 merie otu okenye na-eji kaadị ahụ, ebe yana ego ọ dị oke ọnụ, 1350 meriri. Otu ihe ahụ na bọs.
Eziokwu bụ na ndị Korea na-echegbu onwe ha banyere imepe obodo ha na njem nlegharị anya nke mba na ebe nrụọrụ weebụ gị na njem bụ otu n'ime ihe kacha mma nke m gara na afọ ole na ole gara aga. Ana m ekwu maka ụdị asụsụ Spanish, nke bụ otu n'ime ndị ogbenye. Nke a enweghị ihe ị nwere anyaụfụ maka nsụgharị saịtị ahụ n'asụsụ Bekee yabụ ka anyị jiri ya mee ihe. Ọ na-ekpughe na ha nwere mmasị n'ebe anyị nọ dị ka ndị nwere ike ile ọbịa otú ahụ… South Korea, lee anyị na-aga!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Ozi bara uru maka ịga na South Korea